Af-Soomaaliga Dugsiyada Sare – Fasalka 3aad | maktabadda | Af-Soomaaliga
Category Archives: Af-Soomaaliga Dugsiyada Sare – Fasalka 3aad
13/05/2014 Af-Soomaaliga Dugsiyada Sare - Fasalka 3aadManhajka Waxbarashada Soomaalilaanmaamule
Gabaygaan waxaa tiriyey Abwaan Suldaan Tima-Cadde 1967kii, mar ay gobollada waqooyi ee Soomaaliya dagaallo sokeeye ee qabyaaladeed ka dhaceen, wuxuuna ku tusayaa sida uu Tima-Cadde uga xoroobay qabyaaladda uguna hanuunsanaa Midnimada Ummadda Soomaaliyeed, Cabdulaahi Suldaan wuxuu qabyaaladda ka necbaa ma jirin, waxaadna ka arki kartaa gabaygaan soo socda. Wuxuuna yiri:
Sida roob kaliil hore da’ay oo dunida maansheeyey,
Oo dagalkii geedaha ka baxay dow la garan waayey
Oo duunyo lagu soofiyayoo lagu dabbaalaayo.
Anna gabayga waan daajiyaa sida dir cowleede
Dadka waxaan ogeysiinayaa dowgu suu yahay e,
Soomaalidayaday wanaag idinka doorsoonye
Docdaa bari dareeriga baddiyo Saylac darafkeeda
Dusha koonfureed iyo ilaa webiga daaciisa,
Degmadiina oo idil haddaan dayey abwaagteeda
Dulmi iyo dhac waa waxa qaribay degelediiniye.
Dul iyo hoosba waan ugu dhigee waa dix dhagaxeede,
Anuun baan damqanayee dheguhu uma dalonaale
Dadkaan la hadlayaan leheyn dux iyo iimaane
Wixii horey u soo daashaday dagashanaysaaye
Doqonnimo kugu baahday baan cidi dabiibayne
Duulkii inkaar qaba jinbaa daasadda u tumo e,
Dab markuu baqtiyo meel kaluu dogob ka qiiqaaye,
Waagii dillaacaa naxdimo dihin la sheegaaye,
Doc hadday u wada jeesatooy dhowrto danaheeda,
Ooy duul walaalo ah tahay oo duunka ka heshiiso,
Goortay is wada dooxatay baa daad u soo galay e,
Ubixiinii waad daadiseen waadna dubateene
Dubaaxdiisii waad wada canteen duhur dharaareede
Dariiq toosan Soomaaliday waa lagaa daday e,
Darajada Ilaahey ninkii doonayaa hela e,
Nin ka duday distoorkiyo waxyiga diinta ka carowye
Haddaynaan xumaantiyo dilkiyo deynin qaadka
Dambarkeedu waa jahannamiyo dogobkii naareede
Der-der laysku leeyiyo intaan weerar daba joogno
Oo dumarku weerkii sitaan danabyadii waayey
Debec yaa lahaayey intaa isugu duulayno
Oo sida dareemada u yaal meydka dabadeeda,
Kolla doogsan maysaan haddaad dunida joogtaane.
Kaliil: qorax kulul.
Dalfoof: damaan ama doqon.
Dix-dhagaxeed: dhagax adag oo aanay biyuhu ka dusi karin.
Weer: hengef ama asaay.
Debec: hal magaceed.
1. Yaa tiriyey gabaygaan, goormuuse tiriyey?
2. Maxay aheyd ujeeddada uu abwaanku gabaygaan u tiriyey?
3. Sharax tuduca labo iyo tobnaad?
4. Muxuu ula jeedaa marka uu leeyahay, “Waagii dillaacaba, naxdin dihin la sheegaaye”?
5. Si qoto dheer u sharax tuduca 31aad?
Qaali Waxaad Tiraahdaa
Waxaa la yiri: gabar ina Sayid Maxamed ah oo la oran jiray Qaali ayaa aabbaheed horey u arki wayday, dabadeedna farriin bay waxay u fartay eeddadeed Jamaad Sheekh Cabdulle oo walaalkeed Sayid Maxamed u yeeray, waxayna tiri:
Jamaadey ayeeyooy, erey yar ma iga geysaa?
Caaqilow adoogey, caaway ma iigu sheegtaa?
Mise waan cawdaayoo, cid kalaan u yeedhaa?
Maro waan qabaaye, qalbigaygu wuxuu rabo
Baftadii caddeyd iyo subeeciyadii guduudneyd,
Ma sheekh baan u leeyahay,
Markay kaanta wayn iyo, marbuucdaanan dooneyn.
Sayidka markii hadalkaasi loo sheegay wuxuu gabadhii u mariyey gabaygaan soo socda, wuxuuna yiri:
Qaali waxaad tiraahdaan, qowlkaagii ii yimid,
Dharkaadu qawadaysiyo, qalbigaagu wuxuu rabo
Qaddar Eebbe mooye, qeyb waa lagaa siin
Qurxi hadalka aad tiri, qarba-boosh ma fiicno e,
Quraankana ha laayicin, salaaddana qalle u diid,
Habartaana qaarido, waalid laguma qooqee,
Qabbaan iyo farsamo baro, yaadan qiimo beeline
Qoyskiina mooye, qolo kalena ha u tagin
Huggaagana qordheeyoo, qalyanimo iska ogow
Quudkana isaga tuur, ninkii raba ha qaatee.
1. Qaali maxay aabbaheed fariinta ugu dirta? Yeyse u sii dhiibtay fariinta?
2. Tuduca shanaad iyo kan lixaad ma kaaga muuqataa baahidi Qaali? Sharrax koobanna ka bixi?
3. Maraykaanta iyo marbuucadu waa maxay?
4. Sayidku markii uu farriintii helay muxuu Qaali u soo diray?
5. Waxyaabaha uu Sayidku gabadhiisa Qaali kula taliyey wax ka sheeg?
6. Ma ku raacsan tahay tuduca tobnaad ee jawaabtii Sayidku Qaali kula taiiyey?
Tallan Baan Qabaa
Nin loo yaqaano Kaahin Feedhole oo 70 jir ah ayaa geelii dhowr bari la raaciyey, markaa wiil bar-baar ah oo geel raaci jiray ayaa dhintay. Maxamed Kaahin Feedhoole oo cidda la joogayna waxuu uga maqnaa caro baadi doon iyo hawla kale oo fara badan. Odaygii markuu geel raacistii dhibsaday ayuu ku calaacalay:
Tallan baan qabaa Maxamadow taawil gooniya e,
Toddobaatan baan jiray haddaan tiraba dheereyne
Haddaan timaha guudkayga sare tini madoobeyne
Tallaabo iyo oradkii ninkaa tiicayaan ahaye
Tows iyo xanuun waa waxaan dhab ula taahaaye
Tooraha aroortii haddii ay taaga hor u dhaafto
Tartan iyo ninkii orad hayaa taani soo raga e,
Taaggaas aan leeyahay haddii tooyo la ii raacshay
Oo aanan tudhaaleba sugeyn tacadi wooyaane
Waa tallo Ilaah leeyahoo laga tallaabeyne.
Maxamed gabaygii aabbihii markuu helay buu gabay jawaab ah u soo celiyey wuxuuna yiri:
Dabuub gabay haddaad Kaahinow adigu daardaartay
Anna dabagalkeedaan aqaan daadka maansade e
Dibnihii tiraabaane rag waa kaga dambeeyaaye
Aniga dabuubteyda maqal waan ku daaficiye
Daal iyo dhibaataad sheegatiyo dogobta aad jiidhay
Dabeyshaad wareegtee haraad ugu dayoobeyso
Dadku aabbo waa kula qabaa dunida joogaaye
Duniba nin seexday ma jiro doobi dhamayaaye
Dar baa kaa gu’ weynoo lamara dibadda koolaa e
Dubbow Nuur Caduur maalin qura deex ka hari waaye
Dumarna waa ka haayiray iyo damacii naagoode
Iyana Diiriye iyo Xaashi wey daajiyaan sulube
Dareertiina subaxdii kabtida kama dambeeyaan
Dirka Maxamed-Deeq waa ogtahay duuda uu dhalaye
Difisyoone idil waa ninkaa daadiyee qubaye,
Mana diro e waw taagan yahay doogiyo abaare
Ma dayaco habeen Heybe Nuur sidigta dawlaabe
Dumar wuxuu ku biirshaba ma jiro rag uu dugaashaaye
Dagmadeenna oo idil haddaan dayay intaan eegay
Duqa geel u feydani ka badan doogan soo baxaye
Da’daadaa adduunkiyo wadiyo daan cirroolaha e
Marse haddaadan dariyo laheyn dooni iyo moodhar
Oo dheef Ilaah kuugu daray waxan dareeraayo
Waa kuu danli’i raaciddeed waxaad ku diiddaaye
Marse haddaadan dhaan kuu direyn ceel u dalandoola
Duleeddada ku celi geelu waa dowladdeeniiye
Dubjirkana ka hoy howsha kale kaaga dabac roone.
Tore: socodka geela
Tooyo iyo Taani: laba halaad magacyadood.
Dogob: qori weyn.
Doobi: waa dhiilka caanaha lagu shubto.
Eeyaa: erey ilmaha waalidka ugu yeero.
Dhexe: waa hal magaceed.
Difisyoone: waa af qalaad, gaas ciidan ah ayaa loola jeedaa.
Sidig: nirig qura oo laba halaad jaqda.
Duqa geel u feydani: duqa geel raaca.
Kaaga dabacsane: kaaga fudude.
1. Gabayga hore kumaa tiriyey? Muxuuse u tiriyey?
2. Tuduca uu da’diisa ku sheegayo tilmaan?
3. Dhibaatooyinka uu sheegay soo sheeg?
4. “Waxbo yaan calaacaline Eebbaa sidan ii gartay.” Tuduca sidaa sheegayana waa kee?
5. Gabayga dambe yaa tiriyey? Sababta uu ku yimidna maxay aheyd?
6. Maxay isugu toosnaayeen labada nin?
7. Gabaygan waxaa ku jira dhowr qof, haddaba sheeg mid waliba hawlaha uu qabto?
Ina-Xagaa Dheere wuxuu ahaa nin ari badan lahaan jiray. Dharaar dharaaraha ka mid ah ayaa cudur ka galay arigii. Markaasuu aad iyo aad arigii tamootidiisii uga xumaaday, wuxuuna yiri, “Waxaan yeeli si aan aniga iyo Ilaahay xoolo nooga dhaxeyn. Wuxuu iigu soo mar-marsoodaba ha waaye.”
Markaasuu hadlay oo yiri, “Eebbow ariga qeybtaa adigaa leh, qeybtaa kalena anigaa leh, haddaba qaybtaada sidaad doontid dheh oo haygu imaan.” Dabadeed waxaa dhacday in arigii uu socdo oo maalin kasta wax ka dhintaan.
Ina-Xagaa Dheere, mar Alla marka arigiisa neef ka dhintaba, isna arigii kale intuu u galo, ayuu qaar ka gawracaa, oo yiraahdaa, “Ari la laayaa ari loo laayuu leeyahay.” Maalin dambe, ayaa roob da’ay. Markaasuu Ina Xagaa-Dheere sallax biyo ku jiraan, intuu jilbaha dhigay is yiri ka cab. Dabadeedna sallaxiibaa dibnaha kaga dhagay.
Muddo dabadeed, ayuu sallaxii sii daayey, arigii baa sidiisii hore isaga le’day. Ina-Xagaa Dheere waxaa hal-hayn u noqotay markaa, “Haddaanu hadalno waa af sallax ku dheggeygii, haddaanu aamusnana ariga sedan laga deyn maayo.”
1. Tamooti: dhimasho
2. Sallax: dhagax godan.
1. Ina-Xagaa Dheere ariga qaybintiisa maxaa ku kallifay?
2. Ina Xagaa Dheere diinta wax ma ka yaqaanay?
3. Ma ogaaday inuu qaldan yahay?
4. Wax ma ku qaatay cibaaradii la tusay?
5. Sheekada dulucdeedu waa maxay?
Gogosha Ha Igeynin
Gabaygaan waxaa curiyey gabyaaga weyn ee Qamaan Bulxan, sababtii uu u tiriyey waxay aheyd in gabar uu qabay Qamaan mar ay reerkoodii u soo dhibaad doonatay war been ah loo sheegay oo lagu yiri Qamaan wuu dhintay sidaa daraadeedna gabadhii la guursaay.
Qamaan arrintaa aad ayuu uga xumaaday wuxuuna ka tiriyey arrintaa tixdan soo socota isagoo ku halqabsanaya nin saaxiibkii ahaa oo Haybe la oran jiray, wuxuuna yiri:
Gartay weeye Haybow inaan goroda laadshaaye
Waxba gogosha ha i gaynin hurdadu waygu gibileeye
Rag wax gaara gabadhuu qabay oo guurna lagu sheegay
Iyo gamas mariid leh oo u galay goonjigii hilibka
Ugudboone labadaa hal buu gama’ ladiiyee
Aniguna gaddii baan ahaye gogosha ha i gaynin.
Lo’dii miirta shalay goosataye gaawe laga waayey
Ee gaadh istiribaan ahaye gogosha ha i gaynin
Geenyada bakhtiday kii arkaye dudub uraad gooyey
Ee goobay madaxaan ahaye gogosha ha i gaynin.
Nin ay qaaxo feeraha gashay oo malaxi gaashaysay,
Hadduu gama’ yiraah maydhaqaan gocasho daynayne
Wed gudoonsay seedkana ninkaas guraya weeyaane
Aniguna gaddii baan ahaye gogosha ha i geynin.
1. Goroda laadshaaye: madaxa foorariyaa
2. Gibilay: yar tahay
3. Gamas: waran
4. Goonjiga: bartamaha
5. Gedii: sidii oo kale
6. Gaashaaysay: buuxisay
7. Maydhaqa: dhinaca
8. Gocasho: damqasho
9. Wed: geeri
Wuxuu ku barbaaray miyiga, weligiina magaalo subax kama soo toosin, xoolaha haqaalahooda ayuu aad u yiqiin. Nolosha miyigana mel fog buu ka gaaray, magaalada haddii wax looga baahdo aabihii baa reerka u safri jiray.
Ninka aan dhimman dhibaato waa u hurid la’aane, maalintii dambe ayuu aabihii allaystay, isagana irrido hawleed ooh or lihi ku furmeen. Markii jiilaal caanona ah mareen ayaa baabuurkii ay fuushanaayeen mar qura ah jirjircad iska rogay, intii haruubkoodii buuxsamay weay geeriyoodeen. Faaraxse dhaawac uu la miyir doorsoomay oo aan nabar mjuuqda alahay ayaa dhacday u soo gurmaday dadkii beeraha ka dhawraa iyo baabuurada waddada maraysay, Faarax iyo dhaawicii kleba waxaa degdeg loogu daadgureeyey isbitaalkii ugu dhowaa.
Laba maalmood kaddib ayuu miyirsaday oo wax kala gartay. Markiiba waxay ishiisu ku dhacday waxyaalo aanu weligii il saarin. Sariiro, dhar cad lagu dedey, dhalooyin sariiraha qaarkood ka soo kordeldella iyo dad sariirahaas ku dul jiifay. Isaga oo aad u yaabban ayuu ninkii sariirta ku jiifay oo ma naxe la oran jira waraystay oo yiri; “Waar bal meesha iiga warran
“Meeshani waa aakhiro” ayuu ugu jawaabay ma-naxe.
“Waar xaq” Faarax baa is dhiibay, isaga oo aa naxsan.
Cabbaar markii uu aamusnaa aya oo cad iyo gabadh kaaliso aheyd
rad xirnevd qolkii Faarax iiifav srw
gabadh iyaduna dhar cad qabta oo dadka cunto u
Illayn la yaab ma lahee intuu is hayn kari waayey buu ma-naxe la hadlay oo uu yiri; “Waar kuwanin maxay ahaayeen? Waa malai’gtii oo qof walba wuxuu kasbaday siineysay Ma-naxaa miskiinkii ka sii dhalaaliyey. “Waa xaq!” ayuu faarax mar labaaaa yiri. Waxaanad aqon u lahayniba waa belaayo adduune. wuxuu haddana dad qolka qalLiinka la geynayo oo rarab ama dhooliyaal lagu vvalwaalayey.
Markaasuu mta uu jiifkii sidii wax boodaya ka hinqaday, ayuu ma-nexe ku yiri; “xageebaa loo
“Waa qoladii la xisaabay oo cadaabta iyo janada ayaa look ala dirayaa” “Waa xaq”! buu misana sidiisii ku celiyey.
Naxdin iyo argagax inta uu Ilaahay lsugu Kcciwy Faarax ayuu daqad wejigisiia ku beegneyd eegay, uuna arkay awr afar ahayd oo isbitaalka xaabo u day. Ma’naxe oo markaas in uu kaco oo uu soo oldhaqdo u kaankaansanayey ayuu su’aal kale ku ellyey oo yiri; “Waar awrtaan aakhiro joogtaana jnaxay aheyd? “Waxay sidaan xaabadii Cadaabta jidi lahaa” ayuu ugu jawaabay ma-nexe. 1 sna, “waa xaq”.
Muddo yar ka dib ayaa dhakhtarkii iyo kaalisadii sariirtii Faarax soo gaareen oo intay kaarkiisii
qaateen dawooyin ugu qoreen iyagoon aika u kakla qaadin!
Markii ay ka tageen ayuu ma-nexc weydiiycy oo yiri waar maxay aniga ii qoreen” “Cadaabta” ma naxaa deg-deg ugu jawaabay,
Mai cabbaar ah markii uu fekeray ayuu Faarax,
intuu xanuunkii hayey iska ilaaway, degdeg u kacay,
oo irrida ku booday. Deetana orod buu isqaaday
isagoo doonayey inuu cadaabta cago kaga baxsado.
Shaqaalihii isbitaalku markay addin ku gaari
waayeen ayaa baabuurkii boolisku lahaa lagu eryey
oo sariirtiisii lagu soo celiyey isaga oo lahaa “haddii
aan ifkii camal fasho, malaai gta cadaabtuna cago
iguma gaadheen”. Faarax dadku waxay u qabeen in
wax kala gartay
Ka dhig may ma-nexe miyi talo ku qabsatay Faaraxna la joogo. Ka sheekee waxyaalaha ma-nexe looga maadsan lahaa?
Reer Miyi iyo Reer Magaal: Gabay
Qodobada Soomaalidu ka gabaydo oo aad caanka u ah waxaa ka mid ah xifaalada. Gabayada xifaaladu waxay ka yimaadaan dhinacyo badan oo kala duwan, gabayada noocaasi ahi waxay qani ku yihiin suugaannimo xeelad dheer. Gabaygan soo socda waxaa isku xifaalaynaya laba nin oo reer miyi iyo reer magaal ah, waana kan gabaygii:
Ninkii reer magaalka ahaa baa ninkii reer miyiga ahaa ku yiri:
Walee daacuflow reer miyaan doocna garaneyne
dab la shiday aroortii hadduu daamanka is dhaafsho
doqonimo waa wuxuu cadkiis doc uga in u-ujaaye
haddii roob Ilaah shubo ooy dunji barwaaqowdo
oo doobi caana ah riyaha looga dalaf siiyo
oo rodol uu doon doon ku helay uga dambaysiiyo
isagiyo duqdiisii markaa dawlad la ismoodye
dam damtiyo hangoolkii majiroo diriri maayaane
maantaas ninkii dan ulahow day so hadalkaaga.
Jawaabtii ninkii reer miyiga ahaana waxay haeyd
Dunuunucaye goortuu qaxwaha dibinta saaraayo
duuf lulaye goortuu kaluun labada daan buuxsho
dayn qaatc mccshii nin rag ah debar ka maalaayo
duryan xum< markuu deega buu dunidnnaye
diintiyo wuxuu caayayaa eebbe daayin e
dat wad aan lagaaraneyn sheegto
deeqdana haddii loogu daro darajo weeyaane
waxaa dowrada magaaliyo ninkii degelkeed
Doodan gabayga ah ee labada nin dhex martay keebaad isleedahay waa lagu jilciyey? Waayo?
Labada nin mid waliba sagaal tuduc buu tiriyey, tuducii kastaba midka u dhigma la doono.
Doqonimo waa wuxuu cadkiis doc uga
muujaaye, muxuu gabyaagu tuducaasi uga
Dunuunuc • cabasho
Wadaaddo iyo Wiilwaal: Sheeko
Ummad waliba waxay kedahay dhaqa hiddaheeduba qarannimadeeda, midnima ’ waxa lagu ^aa m ku dhisan yihiin. Uhism^ udciadii badneyd ee aan karaa, afka oo la qoro. looyin badan afkeennu qorneyn. & muteen. hiddaheena iyo dhaqan raajkaa afkeell;‘ vaftbka ku ay aan badannahay ^ xnurtideena qorray, oo dabaqabatayn ;nna dhaafey leh, kagana kaban karra
Haddaynu u kacno xagga sheekooyinkahiddaha ah, waxaynu kala kulmaynaa kuwo murti qoto dheeri ku jirto, kuwo xifaale ah, kuwo maaweelo iyo madadaalo leh iyo kuwo halxiraale, waxbarasho iyo aqoon lijaabinba leh. Sheekooyitikaas oo runtii taariikh ahaan muujinaya sida dhaqankeennu ahaan jiray, waxa ka mid ah sheekada dhex martay wiilwaal iyo Aw-samatar leeddo.
Wiilwaal wuxuu ahaa nin Garaad ah ooh al adag.
Gecesi gacalna ku hiro, nacabna ka hakado, seeftiisuna aanay galka ku jirin, oo dood, deeq iyo
dagaalba ku fiican, sida gabayadiisu muujinayaan:.
Gacan iyo in geed laga hadliyo gobanimaan sheegtay.
Wiilwaal oo maalin meel maraya, ayaa jidka kula kulmay nin wadaad caalima ah, diintana ku xeel dheer, dadkuna ku wada yagaan oo la oran jiray Awwadaadow, maxaad dadka ku waanisaan ood u sheegtaan?”
Aw-Samatar baa intuu garaadkii hor u eegay dhoosha ka qoslay. Kolkaasuu si fudud u yiri, “Garaad cabsida Ilaahay baannu dadka ku waaninaa.”
Wiilwaal baa cabbaar aamusay. Intuu faraskii ka soo degay oo wadaadkii fool-kafool isu hor taagay, ayuu waydiiyey, isagoo ilkacaddaynaya, “oo wadaad, Ilaahay mooyee, cid kale oo laga cabsadaa miyaanay jirin?”
Wadaadkii baa naxay oo yaabay oo u qaadan waayey. Gadaal buu u booday sidii uu dhuxul dab ah ku joogsaday.
Wiilwaal baa iska dhaqaaqay, faraskiisii dusha uga dhacay oo wadaadkii ku yiri; “dood baan ka leeyahay ereygaase, bal haddaba wadaaddadiina oo dhami isu qaylo dirta oo waa inoo burrito iyo geedkii halkaas ahaa.”
Meeshii baa lagu kala dhaqaaqay. Wadaadkii baa qaylo kula dhex dhacay culimadii degmada. Wiilwaal iyo arrinkiisii buu uga warramay. Halkii baa laysu wada cid dirsaday. Kutubtii baa la soo gurtay, la soo qabsaday, iyadoo ballankii lagu soconayo.
Wiilwaalna muxuu sameeyey. M geed dhibba la yiraahdo, jigjigana u ay< Wuxuu hadhaca hoostiisa ood dheer . u ^ k eliyan a u ka sameeyey ardaa ilaxid___ 5 ’ caWS si debecsan
banneeyey, daaftana dareemo iy ^,eg yahay loogu gogley, dacalladana c eyr • . o0da bawdka
Aqai-Soomaali weyne, wuxuu to dtaW ^ buu dhabarkeeda. Ari wanan sooc.< ^aVydkii buu £ceS
keenay. Col fardooley ahna, kastaba laba nin ka joojiyey. ee mesha u yimaadeenna u darban,
ayaa Wiilwaal oo ay harcero socdaan laba nin oo xoo weyne, dharkii dagaalkana huwan, laba seefoodna a sita, wadaaddadii irridda iska soo taagay. Intuu faadhumaystay oo lugba meel dhigtay giirna iska kiciyey oo kelyaha qabsaday, waddaadadiina il xun ku oegay, ayuu labadiisii nin ku yiri; “qabta” isagoo gufuurka cirka u taagaya.
Labadii nine xoogga weynaa, ayaa labadii wadaad ee ugu soo xigay soo qabtay oo kaxeeyey. Aqalkii bawdka ku dheggenaa bay la galeen. Kolkaasaa qub iyo qac iyo caacdu yeertay. Wadaadadi oo yaabsan, oo dhegeha taagaya talana ku firidhaan tahay, ayaa labadii xoogweyne soo noqdeen. Wiilwaal bay is hareero taageen iyagoo seefihii oo dhiiggu tifta hayo gacmaha ku sita.
Wiilwaal oo weld afka circa u taagaya, foolkana ururinaya, ayaa haddana labadii nin ku yiri, “qabta” sidii oo kale ayaa laba wadaad lala kala orday, aqalkii lala galay oo qub iyo qacdu yeertay, seefihii oo dhiig lehna mar kale lala soo noqday.
Mar Alle markii ay wadaadadii arkeen labadii xoogweyne oo soo noqday, ayey oodda jebiyeen,
qabac… qayb iyaga ka mid ah, ayaa bawdkii intii dhere le’ekaa xagga shishe iska dhigtay. Colkii
fardooleyda ahaa ee debedda tubnaa, ayaa soo qabqabtay wixii fakaday. Wadaaddada intii kalena, siday isu garbinayeen ee midba kan kale dusha uga fuulayey, ayaa muskii oogada looga baxay. Iyadoo raggii la moodo biiq la qabtay oo qaar jidhkoodii ooddii jeex-jeexday, qaama dubku ka hoolmay sidii loogu tumanayey oo nin waliba leeyahay, tolow goormaa adna gacanta lagugu dhigi.’
“Waar waa side? Oo maxaa idin helav” saw ;alahaa Ilaah mooyee cid kale lagama cabsado.”
Goortaasaa wadaaddadii qaylo afka kala waaxeen: waai garaad nanna dnammayn, waar garaad hanna dhammayn!” Wiilwaal baa kolkaa yiri, “Haddaba ma ogaateen iii iAUa.Lieiyij.ci laga cabsado, aadmigiisana laga baqo? Manta ka dib, wadaad hub la yaan arkin, Wadaad walow Da qalabKaaga cjaado oo dadkaaga dhinac ka raac.”
Afartii wadaad ee markii hore laga kaxeeyeyna, iyagoo aan waxba wanankii martiqaadka loo keenay mid soo gawracaan, ayey seefihii oo dhiig leh la soo noqonayaan si ay wadaaddada u cabsi geliyaan.
Halkii baa wadaaddadii martiqaad sbaraf leh liogu sameeyey, kolkii uu casharkii u dhammaaday ee la garansiiyey in hub ia’aantu ay nacasnimo ieedahay.
Murti Soomaaliyeedna waxay idhaahdaa: Dagaal gondahaaguu ka dhashaa. Dooddaa wadaadada iyo Wiilwaal dhex marta waxa muujinaysaa in wwiilwaal ujeeday, cu ma u
diintoodana inay haystaan oo ilaahay ka cabsada dalkoodana wax ku taraan ai iyo addin a.
Afku Muxuu La Xoog Yahay
Salaan Carabay gabaygaan waxa uu mariyey isagoo magaalada Neyroobi jooga halkaas oo uu nin uu adeer u ahaa oo uu abaal badan u tirsanayey ugu tagay, ninkaas oo markaas maal qabeen weyn ahaa ayaa halkii uu odayga wax ka tari lahaa inta uu qadiyey ayuu hadana dadkii kale ee Soomaaliyeed ku diray oo yiri, “Waa oday asaasaq ah ee hala hadlina.”
Salaan gabayga wuxuu ku sheegay sadex arrimood oo waaweyn oo uu wiilka u galay, waa tan koowaade isagoo ninkaas iyo geeliisiiba col isku af-duubay ayaa Salaan col uu watay u gurmaday soona furtay, waa tan labaade, mar kale uu ninkaas dowladu xirtay ayuu Salaad dood iyo maal ku soo furtay, waa tan saddexaade, naag uu xoolo ka bixiyey oo laga
qabsaday lagana qaaday uu Salaan u soo furtay, markii uu gar adag la galay reerkii ay gabadhu ka dhalatay, wuxuu asagoo arimahaas sheegaya yiri:
Qeylada xaduurkii ninkay xaraqday laabteydu
Xusul duubka orodkii ninkaan dhab ugu xuurtooday
jilabkii xadhaadhaa ninkaan ugu xajiimooday
guuraha xambaarada ninkuu xagarku ii jeexay
xidhkii odayodheerood markii rag is xiniintaabtay
xaaraamigii olol markuu xila fur kaw siiyey
waataan u xuubsaday sidii xuurta baalka lahe
mumarkuba xublada foosha way xanaf wareeraane
balse in ay xusuus daran yihiin xaylka kale mooge
waxba yaanu xeerkay imarin xoolana isiine
xaashee nin labin kaa xistiyay xumihii waa yaabe
xeerbeegti murantaa gartay xeeli hadashaaye
xubin rag isku waajahay haday xeyga ka cadaato
afku wuxuu la xoog yahay magliga xowda kaa jara e
xafiiskii magaalada wixii xaalad iga gaaray
xabsigii cadaawaha ninkaan xaalan uga saaray
xoolaha markay imid ninkaan xulayey geeleyga
xaashaa nin labin kaa xistiyey xumihii waa yaabe.
Jilib: magac geed
Xagar: magac geed
La is xiniin taabtay: rag isku bareeray
U xuubsaday: ku booday
Xuurta: shimbir magaceed
Xeeli: cilmi ahaan
Olol: waa ninki colka geela dhacay madaxa u ahaa.
Si kooban u sharax tuducyada ka hadlaya in uu Salaan inanka ka abaal dhacay iyo
Immisa waxtar buu odaygu gabayga ku sheegay mid kastaba goonidiisa u sheeg.
“Afku wuxuu la xoog yahay magliga xowda kaa jara e,” ma kula tahay inuu tuducaasi run yahay?
Dhaadaa Wax Ma Dhaafaan
Guuleed oo safar ah iyo nin tafga xaydan oo awr ka lumay baadidoonkii ah, ayaa meel cidla ciirsi ku kulmaya. Isma gacan qaadayaan, afkayse iska salaamayaan.
Ninkii: War salaamu calaykum.
Guuleed: Calaykuma salaam.
Ninkii: War inay badidaada badbaaddo, awr baadi ah ma ii sheegtay?
Guuleed: Allaa igu og, oo il ma saarin.
Guuleed: Ha sheegin
iqaaqid u h1–o1l1l_a_naya haddaa
Guuleed: Sug awka ma il la’aa?
Ninkii Ilaahey ballankii
Guuleed: Awrku culays ma siday?
kaygii.. loo noqon mayo,
oo tallaabo horey u qaac
oo yaaban war waa ku side xageed isaga
Guuleed: Xaggaa iyo meeshaa awalba u socday.
oo caro is maray, Awrkaygiina
oo socosho maagan awr ma arag ee aduu
kaa maqan yahaye raaso
oo flad u xanaaox saJv oo Op uuleed hor “
goynaya: waar aragtayee.. awrkii meel iigu
Guuleed: il ma saarin ee iga hor baydh
oo indhuhu soo gal baxsan yihiin:
waar ha isku keen dilin ee awrkii
Allaa igu og inaan war iyo wacaan toona|
inkir iga kaa wadi mayo
Goor ay isla il daran yihiin oo qir iyo qir uu xaal
joogo, ayaa oday socoto ahi ku soo baxayaa
war salaamu calayku aa
goor fiican baad timid W?JJ bal Ca8 dhiga’
tahav – ee ee … bal n i n k a T ^ ^ Waad
waa tahay … side w*v
I siiyas. wax u jiraan? Ral warka
baadl QOOnkii hann ‘
na kala saar
awrku wuu il la’aa.
(oo shaarubta miiqaya) waa tahay
wuu daba go’naa.
Ninkii: laba moohaaradood oo haruur cad ah
ninkan ayaan la kulmay waa llaah
awr baadi ah ma shegtay baan ku iri
Maya buu igu yiri
misna awrka tilmaantiisii buu ii shee
L”v 1 / A o 1 1 sankana
Ninkii: waa sida … ee ninku awrkaygii meel ha ku
Odaygii- oo guuleed indhalia ku sugaya) war adna
taa soo oog
wax ku dari mayo oo waa siduu kuugu
bidaarta salaaxaya: awrka maad arag r
haa oo Alla ogyahay.
Guuleed: haa hevsto.
side ku ogaatay?
Guuleed: kuu sheegay.
Odaygii: waa tahay
i raadkiisaan meel aan
baan kaga soo dhacay
intuu il la’yahay, oo waliba tan uu
Guuleed: dhirta dhanka bidix ka soo hagaagta wuu jiidhayey.
Odaygii: haa gartay!
Guuleed: deaba la’aantiisa wax aan ku dhaaday
Guuleed: saalada ayuu tuuminayey
Odaygii: oo madaxa lulaya: gartay … gartay…
Guuleed: inuu culays sido waxaa aan ku dhaaday…
Guuleed: cagta ayuu dhulka ku ballaarinayey… radkiisuna si fiican ayuu u dhignaa.
Odaygii: haa haa gartay … gartay!
Guuleed: waa sidaa. Ee ma ku qanacday?
Odaygii: oo ninkii muddiga ahaa kugu quusreebaya, ku qanacaye ma ku qanacday oo wax dhaadiddiisu intay gun dheer tahay ma ku dhacday!
Ninkii oo goorahaanba yaabsanaa, ku qancay oo wuu iga kafiyey siduu tilmaanta awrka ku helay!
laba jawaan wo
Tuumin: isku meel dhig